ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हल्लाबारे के भन्छन् झलनाथ खनाल ? - Dainik Nepal
ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हल्लाबारे के भन्छन् झलनाथ खनाल ?
दैनिक नेपाल २०७६ वैशाख १ गते ७:२८
काठमाडौं, १ वैशाख । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चन्द्रगिरीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका शीर्ष नेताहरूको बैठकका बारेमा आफूलाई जानकारी नरहेको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेवटर्कमा आइतबार बिहान पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता खनालले चन्द्रागिरी बैठकका बारेमा कुनै पनि कमिटीमा छलफल नभएको बताए । ‘चन्द्रागिरीमा के भयो मलाई थाहा छैन । यो कार्यशैली ठीक छैन । कमिटीमा छलफल हुन बाँकी छ’, उनले भनेका छन् ।
नेता खनालले आफू कुनै पनि गुटमा नरहेको बताएका छन् । उनले अर्का वरिष्ठ नेता मधवकुमार नेपालको गुटलाई आफूले साथ नदिएको पनि बताए ।
‘म गुट बनाउने कुरामा छैन । गुट बनाउने कुरा अपराध हो । माधव नेपाल, बामदेव गौतम र मेरो गुट छैन’, उनले भने, ‘मेरा आफ्नै स्वतन्त्र विचार हुन्छन् । सरकारविरुद्धको मोर्चामा छैन ।’
नेकपाका नेता खनालले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मोर्चा गठन नभएको बताए । ‘ओलीविरुद्ध कुनै पनि मोर्चा गठन हुने सम्भावना पनि छैन’, उनले भनेका छन् ।
पार्टी एकीकरणका बेला ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको गोप्य सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने वरिष्ठ नेता खनालले बताए । ‘दुई पार्टी बनेका बेला केही सहमति बनेका होलान्’, उनले भने, ‘त्यो कार्यान्वयन गर्ने दुई अध्यक्षको कुरा हो ।’